Marketingzụ ahịa data na-ekpo ọkụ! | Martech Zone
Satọdee, Nọvemba 9, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Fọdụ nchoputa mara mma sitere na BlueKai's ọmụmụ na usoro atụmatụ ịzụ ahịa data. Echere m na ọ na-adọrọ mmasị na ọfụma dị mkpa mgbe ọ bịara na ohere ọ bụla kacha mma / obe-ikpo okwu. Ọ bụ ezie na ịchụnta igwe na-aga n'ihu na-abụ isi, ọ dabara nke ọma. Ekwenyere m na nke ahụ bụ n'ihi okwu nzuzo Google na idochi algorithms ha na-egbu Industrylọ ọrụ SEO. Ndị na-ere ahịa agaghachila ile anya na nnukwu foto na ihe nwere mmetụta dị ukwuu na ụtụ karịa ịchụ mkpụrụokwu na ogo.
Obi dịkwa m ụtọ ịhụ ka email na-awụlikwa elu 5 na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Email marketing bụ ụlọ ọrụ afọ iri abụọ - oge ochie na andntanetị ma ọ bụghị oke sexy. Ma Marketing akpaaka nyiwe (dị ka anyị haziri nzukọ si Right Na mmekọrịta) bụ na-eweta sexy azụ ya na oke ike itinye aka na ahia ahia. Nlekọta mmadụ ka bụ atụmatụ bara uru, mana ụlọ ọrụ mara na ịre ahịa email bụ ihe dị mkpa ma a bịa n'ịkwalite ahịa na njigide!
Ọ dị mma ịhụ nlebara anya vidiyo nke ọma! Gwọ akwụ ụgwọ na atụmanya maka vidiyo abawanyela. Anyị na-amanye ndị ahịa anyị niile ka ha mepụta ọba akwụkwọ vidio (anyị nwere peeji nke Ahịa Ahịa!) Ma tinye ha n'ihu na etiti na ibe ọ bụla nke saịtị ha. Lelee Videosdị vidiyo nke nkọwapụta site na onye mgbasa ozi anyị Yum Yum Videos maka ụfọdụ echiche!
Tags: akpaakabluekaidataahia na-achuta datanchekwa data nchekwaemailinfographicvidiyo vidiyoVidio AhịaChọọ Marketingelekọta mmadụ mediaSocial Media Marketing
5 sọftụwia dịka aghụghọ aghụghọ nkwekọrịta ọrụ iji zere